Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Dr. Martha Kanter July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Sharon Dhall July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Cathy Casserly July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Hal Plotkin July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Ramona S. Thomas July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Christina Spears July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Jemelleh Coes, PhD July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Sean Nash July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Addressing the Local in Localization: A Case Study of Open Textbook Adoption By Three South African Teachers Selena Burns July 01, 2013 This article presents a case study of the adoption and use of open textbooks by three high school teachers in the KwaZulu-Natal province of South Africa. The textbooks, collaboratively authored and distributed through the South African initiative, Siyavula, are available...
Hey, Kids, Meet Open Education Amee Evans Godwin Do open educational resources (OER) matter to young people?While making a short video recently, entitled "Game Changer: Open Education in Changing the Rules", I posed questions related to Open Educational Resources, or OER, to some Half Moon Bay 6th and 7th...